Yekumhanyisa Reducer & Gearbox Mugadziri, Anotengesa, Fekitori - anodzoreredza, honye anoderedza, honye gearboxes, mapuraneti magiya mabhokisi, ekumhanyisa kudzora, akasiyana, ma helical giya, sprial bevel magiya, ezvekurima magiya, ekurima maturakita, marori magiya, honye gearbox
Vanomhanyisa kumanikidza iwo magiya ezvitima pakati pemota uye chidimbu chemuchina. Chinangwa chekudzora nekumhanyisa kudzora iyo rpm iyo inopfuudzwa pakati peaya maviri ekupedzisira mapoinzi. Vanomhanyisa vanodzora vanotora torque yakagadzirwa nemotokari (iyo yekuisa) uye uiwedzere. Chechipiri, vanodzora kumhanya, zvakanyanya sezita zvarinoreva, reduce kumhanya (iyo rpm kuburitsa) yeiyo yekuisa kuitira kuti icho chinobuda ive chaiyo kumhanya.
Izwi rekuti “gearbox” rinongova izwi rakajairika rechitima chegiye pakati pemota nechidimbu chemuchina. Nekudaro, ese anoderedza anomhanya ari magiya mabhokisi.
Nekudaro, haazi ese mabhokisi emagetsi anodzora kumhanya kwekuisa. Kunyangwe zvisiri zvakajairika, mabhokisi egear anogona kunyatso nyonganiswa kuti awedzere kumhanyisa kwekuisa. Nechekure mhando yakajairika yemabhokisi emagetsi ndeanomhanyisa kudzora, asi zvingave zvisiri izvo kutaura kuti ese magiya mabhokisi anomhanyisa kudzora.
Yakakosha honye inodzora yeGreenhouse
Worm inoderedza Inch Dimension Series UY
Worm inoderedza Inch Dimension Wpa
Worm inoderedza Inch Dimension wps
Worm inoderedza Inch Dimension wpx
Worm inoderedza Inch Dimension WPDA
Worm inoderedza Inch Dimension WPDS
Worm inoderedza Inch Dimension WPDX